Dawlada Kenya Ayaa Sheegtay in Ay Dishay Sarkaal Ka Tirsan Al-shabaab – STAR FM SOMALIA
Booliska dalka Kenya ayaa sheegay ciidamada ammaanka inay toogteen Sarkaal ka tirsan Ururka Al Shabaab, kaasi oo lagu dilay Gobolka Xeebta ee dalkaasi.
Sargaal ka tirsan ciidamada Booliska dalka Kenya ayaa Warbaahinta u sheegay in ninka la dilay lagu magacaabo Jumca Muxamed Jakarta oo loo yaqaan Modi Tulia.
Ninkaan ayaa u dhashay dalka Kenya, laakiin wuxuu ka tirsanaa Xubnaha Shabaabka uga howlgala deegaanka Kwale ee dalkaasi Kenya.
Booliska waxa ay sheegeen markii ay dileen Sarkaalkaasi kadib in ciidamada ay hooygiisa ka soo saareen Bam gacmeed.
Jakarta ayaa dhawaan la sheegay inuu tababaro sare ku soo qaatay dalka Somaliya, oo ay soo taba bareen Al-Shabaab.
Gabar la noolayd Jakarta iyo waliba walaalkiis Majid Akiba Miwa oo ku noolaa guri aan ka fogayn ayaa Ciidamada Booliska ay soo qabteen, markii uu dhamaaday howlgalka ninkaasi lagu dilay.
Xubno badan oo Kenyan ah oo Shabaab ka tirsan ayaa ka howlgala gudaha dalka Kenya, kuwaasi oo fuliyay weerarada Shabaabka.